नेकपा – News Online
प्रधानमन्त्री ओलीले कहाँबाट चुनाव लड्ने– एमाले की नेकपा ?
६ पुस, महोत्तरी । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकटका सांसदहरूको भेलामा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि प्रश्न गरेका छन् –एमालेको अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने ? संविधानविपरीत संसद भंग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमपछि अब उनले पूर्वएमालेलाई ब्युँताउने सम्भावना बढेको छ । आजको भेलामा उनको अभिव्यक्तिले पनि एमाले ब्युँतिने… Continue reading प्रधानमन्त्री ओलीले कहाँबाट चुनाव लड्ने– एमाले की नेकपा ?
Categorized as राजनीति, राष्ट्रिय, समाचार Tagged एमाले, दर्ता, निर्वाचन, नेकपा, पार्टी, प्रश्न
३ मंसिर,काठमाडौं ।सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको प्रतिवाद बैठकमै लिखित ढंगले गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने बताएपछि बुधवार बसेको सचिवालय बैठक १० दिनसम्म स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो । आफूविरुद्ध अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तावका रूपमा आरोपपत्र पेश गरेको… Continue reading मध्यरातको त्यो दौडधूप : जसले टार्यो नेकपाको खड्गो !
Categorized as Headline, राजनीति, समाचार Tagged नेकपा, नेकपा सचिवालय बैठक